Shiinaha dhoobada darbi-gacmeedka farsameeyayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | JIAXING
PVC marmarka dhoobada dardaaranka ah waxaa badanaa laga sameeyaa cusbada polyvinyl chloride (PVC marka la soo gaabiyo). Waxaa ku darsaday wakiilka anti-ultraviolet UV iyo walxo kale oo kiimiko ah,
Ka dib marka la iswaafajiyo cilmiga sayniska, Lagu sameeyay teknolojiyad casri ah.PVC leylka dardaaranka synthetic wuxuu qaataa teknoolojiyad isku dhafan oo lakabyo badan leh, Ku dabool dusha sare ee badeecada lakabka kahortagga gabowga, U adkeysiga cimilada iyo adkeysiga midabka. caabbinta daxalka, iska caabbinta cimilada, oo kuma jiraan asbestos. Midabada dhalaalaya, ilaalinta deegaanka iyo caafimaadka, sidaa darteed waxaa si weyn loogu adeegsadaa warshadaha dhismaha, Si kastaba ha noqotee, foornooyinka dhoobada ah ee dardaaranka ah ee PVC ee hadda jira waxay leeyihiin dhibaatooyinka soo socda: Marka hore, Inkasta oo walxaha xarkaha dardaaran ee dardaaran ee PVC. waxay leeyihiin iska caabin adag, laakiin marka la raacayo gaadiidka ama rakibaadda, waxaa lagu tuujiyaa walxo culus muddo dheer, Way fududahay in la beddelo oo aan la helin qalab nuugista naxdinta leh; Tan labaadna waa marka la rakibay alwaaxda dhoobada ah ee dardaaranka ah ee jira,
Darbiga gudihiisa inta badan si dhow ugama jaanqaadi karo dhismaha, Way fududahay in la sameeyo farqiga u dhexeeya foornada dhoobada dardaaranka ah ee PVC iyo dhismaha, taas oo saameyn ku yeelata saameynta isticmaalka.
Hal-abuurnimadu waxay soo bandhigeysaa alwaaxda darbi-jiifka ah ee dardaaranka ah ee loo yaqaan 'synthetic tile', oo ka kooban jirka laamiga dusha ka sameysan, Qolof sare iyo qolof hoose, qolofka kore waxaa laga hagaajiyaa jirka ugu muhiimsan ee leylka lebenka synthetic, Qeybta hoose waxaa lagu hagaajiyaa jirka ugu muhiimsan ee jirka. lebbiska dhoobada ee dardaaranka ah, jeexdin aan dhawaaq lahayn ayaa laga furay inta u dhexeysa qolofka hoose iyo jirka ugu muhiimsan ee lebenka laastikada ah ee loo yaqaan 'synthetic tile', Guga naxdinta leh ayaa lagu rakibay dusha hoose ee hoose ee jidhka xarkaha, Gudaha gudaha jirka ugu muhiimsan ee lebenka xarkaha loo yaqaan 'synthetic tile' waxaa ka buuxsama maadada polyvinyl chloride, A trapezoidal strip wuxuu kuxiran yahay dusha sare ee kore ee qolofka kore, cusbada ASA-ga ah ee loo yaqaan 'synthetic synthetic' waxaa loo habeeyay inta udhaxeysa qolofka kore iyo jirka ugu weyn ee lebenka synthetic synthetic. foornada dardaaranka ah ee dardaaran ee loo yaqaan 'PVC synthetic tile' ayaa walxaha culus lagu tuujiyaa muddo dheer. Waxay u egtahay in si fudud loo rogrogo, la'aanta naxdinta nuugista, Intaas waxaa sii dheer, darbiyada gudaha ee marmarka dhoobada ah ee darbiyada ah ee hadda jira ee PVC inta badan way awoodaan si dhow ha ula jaanqaadin dhismaha Dhibaatada ka dhalata fududaanta ka dhalata farqiga.